watchOS 8: fanatanjahan-tena bebe kokoa ary zava-dehibe amin'ny fahasalamana manokana | Vaovao IPhone
watchOS 8: fanatanjahan-tena bebe kokoa ary zava-dehibe amin'ny fahasalamana manokana
watchOS 8 dia nanomboka nipoitra tao amin'ny WWDC 2021. Ny zava-baovao voalohany dia avy amin'ny tanan'ny Action, Training and Apple Fitness +, izay rehetra misy ifandraisany amin'ny fanatanjahan-tena eo amin'ny tanantsika. Natomboka ny fampihetseham-batana vaovao, ny fampiharana ny Breathe dia nohavaozina hanome endrika fisaintsainana vaovao ary Ny mari-pahaizana momba ny tahan'ny taovam-pisefoana dia ampiana ao amin'ny app Sleep. Vaovao mahafinaritra manomana ny fahatongavan'ny Apple Watch Series 7.
Fahasalamana, fanofanana ary bebe kokoa amin'ny fiambenanaOS 8
WatchOS 8 dia mampiditra fampihetseham-batana roa vaovao amin'ny fampiharana Train: Tai Chi sy Pilates. Fanatanjahan-tena roa vaovao izay manatevin-daharana ireo efa misy izay ahafahantsika mampitombo bebe kokoa ny fahaizan'ireo hetsika azontsika atao amin'ny Apple Watch. Misy koa vaovao ao amin'ilay fampiharana Miaina, izay mandray dian-tongotra miaraka amina sary mihetsika vaovao sy fampidirana fisaintsainana ao anatin'ireo fampitaovana misy.
Nampidirina ao koa izy ireo fampiofanana vaovao ao amin'ny Apple Fitness + izay nantsoin'i Apple Spotlight Artists, fiofanana natao tamin'ny hira malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Fahasarotana iray hafa ho an'ireo mpampiasa izay misoratra anarana amin'ity serivisy ity ary maniry ny hankafy ny tenany rehefa manao spaoro.
Etsy ankilany, ary manondro ny sehatry ny fahasalamana, nampiana ny fahaizana mandrefy ny tahan'ny taovam-pisefoana mandinika miaraka amin'ny masontsivana hafa ny fahasalamantsika rehefa matory isika. Etsy ankilany, na dia tsy natolotra tamin'ny fomba ofisialy aza, dia natolony ihany koa Hanana ny fampiharana Calculator ofisialy isika amin'ny watchOS 8, zavatra izay nangatahinay nandritra ny taona maro ary koa ny fampiharana fifandraisana, satria efa nivoaka ny tsaho tato anatin'ny herinandro lasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » watchOS » watchOS 8: fanatanjahan-tena bebe kokoa ary zava-dehibe amin'ny fahasalamana manokana
Ary ny fampahavitrihana ny Electrocardiogram ho an'i Mexico Rehefa 🙁
Podcast 12x34: Famakafakana Keynote WWDC 2021
Ny fahasalamana dia hanara-maso tsara kokoa ny fahasalamantsika amin'ny iOS 15